Ezaky ny fitondram-panjakana : Ankizy 310 011 nisitraka ny « Cantine Scolaire » -
AccueilRaharaham-pirenenaEzaky ny fitondram-panjakana : Ankizy 310 011 nisitraka ny « Cantine Scolaire »
27/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Misy ny ezaka amin’ny “cantine scolaire” izay hanampiana ny mpianatra sy ireo ray aman-dreny amin’ny lafin’ny sakafo. Noho ny fahitana ny tsy fahampian’ny eo am-pelatanan’ireo ray aman-dreny no antony mahatonga ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny mpiara-miombon’antoka miaraka amin’ny fitondram-panjakana mitady fomba hanalana fahasahiranana ny fianakaviana any amin’ny kaominina tena sahirana sy ireo EPP maro manerana ny Nosy. Ao anatin’ny ezaky ny fitondram-panjakana izay indrindra, sia sekolim-panjakana miisa 6 644 manerana an’i Madagasikara no nahazo “cantine scolaire” tamin’ity taona 2017 ity, ka ankizy mahatratra 310 011 no nahazo tombontsoa amin’izany.
Ity fitondrana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ity angamba no fitondrana tena nijery akaiky ny lafin’ny fanabeazana indrindra. Tsotra ny antony. Ny fanabeazana no fototry ny fampandrosoana, ka tsy nataony ambanin-javatra. Na mazoto hianatra tokoa aza ny ankizy rehefa tsy misakafo, dia zava-poana izany. Manampy betsaka ny ray aman-drenin’ny mpianatra araka izany ny tetikasa “cantine scolaire”.
Ankoatra ny fanalana ny fahasahiranan’ireo ray aman-dreny, dia tanjon’ny tetikasa ny mba hifantohan’ireo mpianatra amin’ny fianarana rehefa voky. Mba hialana amin’ny ohabolana malagasy, hoe “rehefa noana ny kibo mivezivezy ny fanahy.” Eo koa ny fanampiana ireo ray aman-dreny hifantoka amin’ny asa aman-draharahany fa mbola tsy hanenjika hikarakara ny sakafon’ny ankizy. Satria isan’ny maha-betsaka ireo ankizy mitsoaka an-daharana ny tsy fisian’ny sakafo izay harapaka.
Ny hetsika “cantine scolaire” izay mbola maneho hatrany ny maha-zava-dehibe ny lafin’ny fanabeazana eo amin’ny fitondram-panjakana. Mbola hitohy kosa ny hetsika ho an’ny taona 2018. Tanjona ny hametraka “cantine scolaire” miisa 128 500 an-tanàn-dehibe, ambanivohitra ary amin’ireo toerana tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo. Ho an’ny faritra Atsimo Andrefana sy Anosy ary Androy, “cantine scolaire” miisa 1 200 ho an’ny sekoly miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana kasaina apetraka. Ankizy miisa 26 935 isa kosa no kasaina hahazo tombontsoa amin’ny sekoly 115 miankina sy tsy miankina any amin’ny faritra Alaotra Mangoro, Atsinanana ary Analamanga. Tafakatra 73 159 kosa ireo kasaina hahazo tombontsoa any amin’ny sekoly miankina sy tsy miankina miisa 105 sy ivon-toerana AKAMA 35 amin’ny faritra Analamanga, Alaotra Mangoro ary Atsinanana.
Omaly vao maraina dia nanao diabe niainga avy eny Mahamasina nankeny Antsahamanitra ireo fikambanana sendilaky miaro ny zon’ny mpiasa. Niisa 38 ireo fikambanana sendikaly ireo ka ny “Sendikà matanjaka, antoky ny fandrosoana lovainjafy”, no lohahevitra ...Tohiny